Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Iibsashada Siyaasadda Caymiska Caafimaadka? Ha ilaawin 5 shay
Boostada martida • Caafimaadka Warka
Lahaanshaha sawirka shutterstock
Iibsashada caymiska caafimaadku waa mid ka mid ah go'aamada ugu muhiimsan nolosha, maadaama ay kaa caawineyso inaad ku badbaadiso waqtiyada dhibaatooyinka iyo inay kaa ilaaliso qarashka sii kordhaya ee isbitaal dhigista. Waa dalladdii aad dib ugu soo laaban lahayd marka aad u baahan tahay iyo shabakadda badbaadada qoyskaaga marka ay dhacdo nasiib -darrada ah ee uu qof u baahan yahay isbitaal.
Maxaad raadinaysaa marka aad dooranayso siyaasadda caafimaadka?
Maxay yihiin qodobbada muhiimka ah ee laga rabo qorshe caymis caafimaad oo adag?
Waa maxay siyaasad caafimaad oo la habeeyay oo maxay tahay ikhtiyaarka ugu fiican?
Laakiin, sidee baad u doorataa mid ku siisa dhammaan faa'iidooyinka aad raadinayso oo aad ku bixinayso ballantii. Maxay yihiin waxyaabaha ay tahay inaad raadiso markaad dooranayso siyaasad caafimaad? Aynu eegno qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee qorshaha caymiska caafimaadka ee adag ay tahay inuu bixiyo si uu u soo baxo.
Siyaasadaha la habeeyay
Hal cabbir oo dhan ayaa ku habboon miisaan badan ma laha marka laga hadlayo siyaasadda caafimaadka maaddaama shaqsi walba leeyahay baahiyo iyo shuruudo kala duwan. Caymiye wanaagsan ayaa had iyo jeer tixgelin doona baahida shaqsiga wuxuuna bixin doonaa siyaasado u hoggaansan shuruudahaas gaarka ah. Siyaasad la habeeyay ayaa bixin doonta waxyaalo dheeraad ah oo bixiya dabool dheeraad ah sida ikhtiyaarka ah in laga faa'iidaysto daaweyn ka baxsan Hindiya, kharashka ku baxay ra'yiga labaad, iyo kuwo kale. Sidaa darteed, had iyo jeer soo ogow haddii waxtarka noocaas ah la bixinayo iyo in kale ka dibna dooro siyaasaddaada si waafaqsan.
Adeegyada La Kordhiyey
Waa da'da dhijitaalka ah, looma baahna in mar walba lagu qaado nuqullo adag. Soo ogow haddii bixiyahaaga caymisku bixiyo adeegyo lagu daray oo ah qaab app ah oo aan kaa doonayn inaad sidato dukumiintiyada siyaasadda caafimaadka agagaarka oo wax walba si fiican loo galiyay hal meel oo la heli karo meel kasta, waqti kasta.
Siyaasad kasta oo caafimaad waxay wanaagsan tahay oo keliya haddii hannaanka sheegashada uu u siman yahay xariir. Had iyo jeer isbarbar dhig saamiga dejinta sheegashooyinka ee bixiyeyaasha caymiska oo kaliya liis garee kuwa leh taariikh aad u wanaagsan marka ay timaaddo bixinta hannaanka dejinta sheegashooyinka bilaa dhib ah. Sida ugu habboon, sharadkaaga ugu fiican ayaa ah inaad hesho mid leh koox gudaha ah si ay u xalliyaan sheegashooyinka maadaama ay dhakhso badan tahay oo ay tahay meel-joogsi keliya si loo xalliyo wixii su’aalo ama jahawareer ah oo aad la kulanto waqtiga isbitaal-dhigista ama bixinta.
Haddii aad xaas leedahay ama aad qorsheyneyso inaad guursato mustaqbalka, tani waa wax aad mar walba ka hubin karto caymiyahaaga. Dhalashada ilmuhu waa mid ka mid ah daqiiqadaha ugu wanaagsan nolosha iyo lahaanshaha siyaasad caafimaad oo bixisa faa'iidooyinka umusha ayaa kaa caawin doonta inaad ku raaxaysato daqiiqadaha ugu fiican nolosha adoo daryeela dhammaan biilasha isbitaalka oo kuu oggolaanaya inaad waqti badan la qaadato qoyskaaga.
Liiska isbitaallada ku jira shabakadda caymiska ayaa ah qodob muhiim ah oo ay tahay inaad tixgeliso marka aad iibsaneyso siyaasad caafimaad. Hubi haddii ay ku jirto liisaska xarumo caafimaad oo heer sare ah iyo in isbitaallada dhow ee agagaarkaaga ah ay daboolan yihiin iyo in kale. Had iyo jeer dooro siyaasad caafimaad oo daboolaysa isbitaallada oo ay u badan tahay inaad kaxaysato dadka aad jeceshahay haddii ay dhacdo nasiib darro isbitaal dhigid si aad uga faa'iidaysato dheefaha lacag la'aanta ah. Haddii ay dhacdo, isbitaallada aad doorbidayso kuma jiraan liiska shabakadda, waa inaad jeebkaaga ka soo baxdaa lacag oo aad dib-u-magdhaw dalbataa taas oo lafteedu noqon karta geedi-socod waqti badan qaadanaya.
Caymiska caafimaadka ee daryeelka wuxuu bixiyaa siyaasado ku wajahan badbaadinta adiga iyo qoyskaaga waqtiyada a dhibaato caafimaad oo kaa ilaalinaya qasab maaliyadeed adiga oo bixiya caymis dhammaystiran kaas oo daryeela dhammaan kharashaadka isbitaalka iyada oo aan la saarin kirada qolka, wax laga jaro, ama wada-bixinta.
Si kasta oo aad maanta caafimaad u leedahay, marka aad weynaato, garbaha ee gaashaanka ayaa aakhirka bilaabi doona muuqashada iyo siyaasad caafimaad ayaa ah sharadkaaga ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo marxaladaha dambe ee nolosha. Si kastaba ha ahaatee, si aad uga hesho faa'iidooyinka ugu badan, waxaa ugu wanaagsan in aad caymis gasho marxaladda hore oo aad ku raaxaysato caymiska sare ee khidmadaha hoose.